ဒီတစ်ခေါက်တော့ အသစ်ထွက်လာတဲ့ Driver Pack Solution 11 (All Laptop & PC Driver) တစ်ခု ရှာတွေ့လို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အဲဒါမျိုးDriver တွေက ကွန်ပြူတာသမားတိုင်း မရှိမဖြစ်ဆောင် ထားသင့်တဲ့ Driver တစ်မျိုးပါ။ ဘယ်လို Driver မျိုး ကိုမဆို သူက ဆွဲပြီးတင်ပေးသွား တာဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ် ကွန်ပြူတာမဆို ဘယ် Window မဆိုအသုံးတည့်တဲ့ Driver တစ်မျိုးပါ။
ညွန်းတာကတော့တော်တော်လေးကို ညွန်းပြီးသွားပြီဗျာ။တကယ်တမ်းကောင်းမကောင်းကိုတော့ သုံးကြည့်မဘဲသိမှာဘဲဗျ။ဒေါင်းရတာ အဆင်ပြေအောင် အပိုင်း 31 ပိုင်းခွဲပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
အေးအေးဆေးဆေးဒေါင်းကြပေါ့ဗျာ။ အပိုင်း 1ပိုင်းမှာ 95MB ရှိပါတယ်။စုစုပေါင်း 2.81GB ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ Site ကို ၀င်လို့မရဘူး ဆိုရင် Ultrasurf တို့ Freedom တို့နဲ့ကျော်လိုက်ရင်
ရပါတယ်။ ဒါမှမကျော်ချင်သေးဘူးဆိုရင်လည်း Mediafire နဲ့ နှစ်မျိုးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အသုံးတည့်
မယ်ဆိုရင်တော့ အောက် က Link မှာသာ ဒေါင်းယူကြပါနော်။ အားလုံးဘဲအဆင်ပြေကြပါစေဗျာ။
အဲဒါမှ အဆင်မပြေရင်တော့ အောက်မှာနောက်တစ်ခု တင်ပေးထားပါသေးတယ်။
မရှင်းပြခင်မှာ ဒီ Post လေးကို MMiTD မှ ဘော်ဒါကြီး ကို Lin Ko Ko ရဲ့ Post မှ ပြန်လည်မျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
ဘာလဲဆိုတော့ Window7& XP အမြန်တင်နည်းလေးပါ။မသိသေးတဲ့သူတွေအတွက်
ရည်ရွယ်ပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အောက်မှာလည်း ပုံလေးနဲ့တကွ သေချာရှင်းပြထားပါတယ်။
တင်တဲ့အချိန်ထက် 10မိနစ် 15မိနစ်လောက်သက်သာစေပါတယ်။ ကဲစပြီနော်။ပုံမှန်အတိုင်း Install လုပ်
နေကျအတိုင်းဘဲလုပ်ပါ။အောက်မှာ မြင်ရတဲ့အတိုင်း ရောက်ပြီဆိုရင် Shif+F10 ကိုနှိပ်ပါ။
command prompt ကျလာပါလိမ့်မယ် အောက်က လိုပေါ့
အဲဒီအဆင့်ရောက်ပြီဆိုရင် taskmgr ဆိုတဲ့ command လေးထပ်ရိုက်ပေးပါ။
အဲလိုလေးရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင် taskmanager box လေးကျလာမှာပါ။
အဲဒီမှာ Install Windows မှာ right click နှိပ် go to process ဆိုပြီးနှိပ်ရမှာပါ။
အဲလိုလေးနှိပ်လိုက်ရင် process tab ကိုရောက်သွားပါလိမ့်မယ် ။ အောက်က ပုံအတိုင်း
သူ auto select မှတ်ပေးထားတဲ့ setup.exe နေရာမှာဘဲ right click နှိပ်ပြီး Set Priority ကို High ကိုပြောင်းပေးရမှာပါအောက်အကအတိုင်း Box လေးကျပြီး မေးပါလိမ့်မယ်။ change priority ကိုနှိပ်ပေးပါ
ဒါဆိုရင်လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးသွားပါပြီ။အခုဖွင့်ထားတဲ့ Box တွေအကုန်ပြန်ပြီးပိတ်လို့ရပါပြီ။ ပုံမှန်အတိုင်း
၀င်းဒိုးတင်လို့ရပါပြီ။ ၀င်းဒိုးကိုထိခိုက်ခြင်းမရှိပါဘူး။ပုံမှန်အတိုင်းသုံးရုံပါဘဲ အခုလုပ်တဲ့priority ကို high လုပ်ပေးရခြင်းဟာ ဒီ Window Install လုပ်ခြင်း ဦးစားပေးအဆင့်ကို မြင့်တင်ပေးတဲ့သဘောပါဘဲ။အား
Window XP User တွေအတွက်ကတော့ အောက်ကအဆင့်လေးမှာ အထက်ပါအတိုင်း လုပ်ဆောင်ရုံပါဘဲ
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 8:53 PM6comments:
Labels: IT ဗဟုသုတ, Window
ဒီ Software လေးကတော့ File Size တော်တော်များများကို Convert လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ထုံးစံအတိုင်းFull Version လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။အသုံးပြုရတာလွယ်ကူတဲ့အတွက်တော့ ရှင်းပြမနေတော့ပါဘူး။သူ့ရဲ့Feature ကိုတော့ အောက်မှာ အသေးစိတ်ဖော်ပြပေး လိုက်ပါတယ်ဗျာ
။ဒေါင်းရအဆင်ပြေအောင် Link နှစ်မျိုးမှာ တင်ပေးထားပါတယ်။ အောက်က Link မှာဒေါင်းယူကြပါနော်။အားလုံးဘဲအဆင်ပြေကြပါစေဗျာ။
– To quickly convert documents implementedatoolbar that automatically built into the programs of Microsoft Office. The toolbar contains three buttons for one click convert open document in PDF JPEG or TIFF. The fourth button panel makes it easy to convertadocument with user-defined settings such as output file format watermark options etc.
– Added the ability to convert documents to PDF non-PDF / A and not password protected. This is necessary so that the user could edit the PDF in Acrobat Pro using the toolbar “Advanced Editing”.
– An issue that sometimes occur when you install Universal Document Converter on computers withalarge number of printers (20 and over).
– Public API software was seriously reworked. Change the properties and methods of some interfaces included in the IPA and the name ofatype library. Improved performance of functions IPA program.
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 9:05 PM No comments:
ကွန်ပြူတာတစ်လုံးရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေထဲမှာ Memory Card ကလည်း အဓိကနေရာကပါဝင်နေပါတယ်။ သူရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေကျဆင်းသွားမယ်ဆိုရင် ကွန်ပြူတာကို အသုံးပြုရတာ အရင်တုန်းကလောက် မြန်ဆန်မှုရှိမှာအဟုတ်တော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် အခု Memory Cleaner လေးနဲ့သာ Memory ကိုစစ်ပေးမယ်ဆိုရင် တော့ Memory ကိုရည်ရှည်ကောင်း မွန်စွာ အသုံးပြု နိုင်မှာဘဲဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ပတ်ကိုတစ်ကြိမ်လောက်စစ်ရုံနဲ့လုံလောက်ပါတယ်။ File Size ကလည်း 496KB ဘဲရှိတဲ့အတွက် ဒေါင်းရတာရော သိမ်းရတာပါ အဆင်ပြေပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်အောက်က Link မှာဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်။အားလုံးဘဲအဆင်ပြေကြပါစေဗျာ။
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 1:39 AM No comments:
ဒီ Software လေးကတော့ Window ကို အဓိကထားပြီး အသုံးပြုနေကြတဲ့ ကျွန်တော်တို့ အတွက် မရှိမဖြစ်ဆောင်ထားသင့်တဲ့ Tool လေးတစ်ခုပါ။ သူကတော့ Window တွေ မှာဖြစ်တက်တဲ့ Error တွေကို ဖြေရှင်းဖို့အတွက် အကောင်းဆုံး Software ဆိုလည်းမမှာပါဘူး။ သူ့မှာတော့ Privacy Cleaner , Registry Cleaner , Advance Tool , System Booster , System Security စတဲ့ Function များပါဝင်ပါတယ်။ အပိုင်းတစ်ခုချင်းစီအလိုက် အသေးစိတ် Scan ဖတ်ပေးပြီး Error တွေကိုဖြေရှင်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ ထုံးစံအတိုင်းဘဲ Full Version ဖြစ်အောင် Patch ထည့်ပေးထားပါတယ်။ Full Version ဖြစ်အောင် My Computer > Local Disk ( C ) > Program File > Windows Doctor ဆိုတဲ့ Folder ထဲမှာ Patch File ကို Copy ကူးပြီး Double Click ပေးလိုက်ပါ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ Patch ကိုနှိပ်လိုက်ရင် Full Version ဖြစ်သွားပါပြီ။ အောက်က Link3မျိုးနဲ့တင်ပေးထားပါတယ်။ အားလုံးဘဲအဆင်ပြေကြပါစေဗျာ။
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 1:30 AM No comments:
မိမိတို့စိတ်ကြိုက် ဓာတ်ပုံတွေကို ပန်ချီးကား အဖြစ်ပြောင်းလဲရအောင် (Mediachance Dynamic Auto-Painter 2.5.1_Portable)
ဒါလေးကတော့ မိမိတို့စိတ်ကြိုက် ဓါတ်ပုံတွေကို ပန်းချီကားလေးအဖြစ် ဖန်
တီးပေးတဲ့ Software လေးဘဲဖြစ်ပါတယ်။ Portable လေးတင်ပေးထားတာပါ။ အသုံးပြုရတာရောဒေါင်း
ရတာပါဆင်ပြေတာပေါ့နော်။ဒီ Software ကို အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့Portable ကို Run လိုက်ပါ။ ပြီးသွားရင် မိမိတို့ပြောင်းချင်တဲ့ ပုံလေးကို ထည့်ပြီး စိတ်ကြိုက် အရောင်လေးတွေထည်းပြီးပြီဆိုရင် Start ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
သူ့အလိုလို ဖန်တီးပေးနေပါလိမ့်မယ်။ မိမိတို့ စိတ်ကျေနပ်မယ့်နေရာလေး
ကိုရောက် ပြီဆိုရင် Stop ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ နောက်ဆုံးအဆင့်ကတော့ Save လုပ်လိုက်ရင် မိမိတို့လိုချင်
တဲ့ပုံလေးကိုပန်ချီကားလေးအဖြစ်ရရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါင်းရအဆင်ပြေအောင်Link နှစ်မျိုးမှာတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အားလုံးဘဲအဆင်ပြေကြပါစေဗျာ။
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 10:52 PM No comments:
ဒီ Software လေးကတော့ ကွန်ပြူတာမှာ မလိုအပ်တော့ တဲ့ Software တွေကို ဖျက်ပေးတဲ့ (Uninstall) လုပ်ပေးတဲ့ Software လေးဘဲဖြစ်ပါတယ်။အခြား အသုံးဝင်တဲ့ Feature
တွေကိုတော့ အသေးစိတ် အောက်မှာဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ ကွန်ပြူတာတစ်လုံးမှာရှိထားသင့်တဲ့ Software ပါဘဲ
စိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုရင် တော့အာက် က Link မှာဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်။
Facebook တွင်လုံခြုံစိတ်ချစွာရှိနေဖို့အတွက် အကြံပြုချက် (၇) ချက်
Facebook တွင်လုံခြုံစိတ်ချ အစစ်အမှန် မဟုတ်သော ကမ္ဘာသည် အန္တရာယ်တစ်ခုပင် ဖြစ်နိုင်သည်။ဖေ့ဘုတ်ခ်တွင် သင်သည် ဘေးအန္တရယ်မှ ကင်းဝေးရန် အောက်ပါအချက် ၇ ချက်ကို အသေအချာ ဖတ်ရှုပါ။
ဒါကတော့ ရှေ့သို့ ဖြောင့်တန်းနေတယ်လို့ သင် တွေးထင်နေလိမ့်ပါမယ်။ ပြီးတော့
လူအများဟာ ထင်မြင်ချက်အောက်နေ သူတို့တွေ ပုန်းကွယ်နှင့်ပြီးဖြစ်သည်။
သို့သော် သင်ဟာ ၎င်း categories အများအပြားတွင် ဆက်တင်ကို မသုံးဘူးဆိုရင်
တခြားလူတွေက သင့်ရဲ့ အချက်အလက်တွေကို မြင်တွေ့နေရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတော့
ဖေ့ဘုတ်လ်အကောင့်အတွက် အလွန်အရေးကြီးတဲ့ အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
Categories ၁၂ ခုလုံးအတွက် သင့်ရဲ့ သီးသန့်တည်ရှိမှုကို ချိန်ကိုက်ပါ။
အဲဒီနောက်မှာ Privacy> Contact information ကို ပြန်သွားပါ။ သင့်
privacy ဆက်တင်မှာရှိတဲ့ categories ၉ ခုလုံးကိ ပြင်ဆင်ပါ။
တစိမ်းတရံလူများရဲ့ သင့် စာမျက်နှာကို ဆက်သွယ်လာမှုကို တားဆီးရန်
settings> Search သို့သွားပါ။ ဖေ့ဘုတ်ဘ် ရှာဖွေရေး ရလဒ်အတွက် ‘Only
friends’ ဆိုတဲ့ ကို ရွေးချယ်ပါ။
ဒါတွေကို ရပ်တန့်အောင် လုပ်ဆောင်ဖို့အတွက် Account> Privacy>Settings
and websites ကို ကလစ်ပါ။ နောက်တဖန် ‘Instact Personalisation Pilot
Program ’ ကို သွားပြီး ‘Edit setting’ ကို ကလစ်ပါ။ ဖန်သားပြင်ရဲ့
အောက်ဆုံးမှာ ပုံးလေဟာ အမှန်ခြစ်ထားတာမှာရှိတဲ့အတွက် အသေအချာ ပြုလုပ်ပါ။
ဘယ်ကြေငြာမှာမှ သင့် အချက်အလက်တွေ မပေါ်အောင် အသေအချာလုပ်ဆောင်ရမှာက
Account> Account Settings> Facebook Adaverts ဆီသွားပါ။ ‘no one’
on ‘Allow ads on platform pages to show my information to’ နှင့် ‘Show
my social actions in Facebook ads to’ တခုကို ရွေးချယ်ပါ။
အရင်ပတ်က ဖေ့ဘုတ်ခ်မှာ မကြာသေးခင်က ထွက်ပေါ်လာတဲ့ အကြောင်းအရာအသစ်ဖြစ်ပါတယ်။
feature အသစ်က သင်အကောင့်ကို ဆက်သွယ်ဖို့ ကြည့်ရှုစစ်ဆေးမယ့် devices
များကို ခွင့်ပြုခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Account> Account settings > Account security သို့ သွားပါ။ ‘Would
you like to receive
notifications for logins from new devices’ ကို ကလစ်ပေးပြီးနောက်မှာ
အောက်မှာ ရှိတဲ့ ‘Yes’ ကို ကလစ်ပါ။
အဲဒီ့နောက်မှာ ၎င်းက သင့်အီးမေးလ်ဆီ ပို့ပါလိမ့်မယ်။ အခုချိန်မှာတော့
သင်မသုံးတဲ့ device မှ သင့် အကောင့်ကို တခြားတယောက်က ၀င်ရောက်မယ်ဆိုရင်
အီးမေးလ်က ပြောပြတာကို သင်သည် လက်ခံ ရရှိပါလိမ့်မယ်။ ထိုပုံစံမျိုး
ဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဆိုရင် သင်အနေနဲ့ ချက်ချင်း လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကို
ပြောင်းလဲပေးပြီး ဖေ့ဘုတ်ခ်ရဲ့ Help Centre ကို အကြောင်းအကြားပါ။
ပစ်မှတ်ကောင်းတခု ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းတို့ဟာ သင့်ရဲ့ ပိုမိုပြည့်စုံတဲ့
သတင်းအပြည့်အစုံတွေစုဆောင်းပြီး ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့ သင့် ဘဏ် သို့မဟုတ်
credit ကဒ် အကောင့်တွေကို ဆက်သွယ်ရယူပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ သင်အနေနဲ့
ပရိုဖိုင် စာမျက်နှာဆီသွားပြီး ‘info’ tab ကို ကလစ်ပါ။ “Edit information”
လုပ်ပါ။ အခြေခံ အကြောင်အရာအချက်လက်အောက်မှာ မွေး သက္ကရာဇ်တွင် လ သို့မဟုတ်
ရက် ကိုသာဖော်ပြပါ။ အပြည့်အစုံ မဖော်ပြပါနဲ့။
၆။ သင်သူငယ်ချင်များမှ သင့်ကိုယ်သင် ကာကွယ်ပါ။
ကာကွယ်ရန်အတွက် Account > Privacy Settings > Applications and
What your friends can share about
you သို့သွားပါ။ ပုံးပုံစံအားလုံးထဲက အမှတ်ခြစ်ထားတာတွေကို ပြန်ဖြုတ်ပြီး
ဖေ့ဘုတ်ခ်ပေါ်တွင် သင်ပို့စ်လုပ်သည့်အခါတိုင်း လိပ်စာ အပြည့်အစုံ မသုံးမိရန်
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 9:11 PM No comments:
သတိအောက်ပါကုတ်များသည် notepad ပေါ်တွင်သုံးနိုင်သည်။
ပထမဆုံးသင့် notepad ဖွင့်ပါ။
အောက်ကကုတ်တွေကို notepad ပေါ်တင်ပါ
သင်ကိုယ်တိုင်ဖွင့်မှ ပွင့်နိုင်မယ့် program လေးတွေပါ။
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 2:58 AM No comments:
ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ တီးလုံးလေးတွေ၊ သီချင်းစာသားလေးတွေ၊ အသံးလေးတွေကို
ကိုယ်လိုချင်တဲ့နေရာလေးတွေကိုဘဲ သီးသန့် ဖြတ်တောက်ပြီး Phone Ringtone လုပ်လို့ရတဲ့ Software လေးဘဲဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ကြိုက်တီးဖြတ် အသုံးပြုချင်သူတွေအတွက်တော့ Free Ringtone Maker လေးက အထောက်အကူပေးပါလိမ့်မယ်။ Portable လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ပိုပြီးတော့ အသုံးပြုရ
စတင်အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ Free Ringtone Maker လေးကို Run လိုက်ပါ
ပြီးရင်ကိုယ် လိုချင်တဲ့သီချင်းစာသားလေးနေရာမှာ ရွေးပြီး Convert လုပ်ပေးလိုက်ရုံပါဘဲ။ လုပ်ကြည့်
လိုက်ရင်ကျွန်တော်ပြောတာထက်လွယ်နေမှာပါဗျာ။ အောက်က Link မှာဒေါင်းကြပါဗျာ။ ဒေါင်းရအဆင်
ပြေအောင် Link2မျိုးပေးထားပါတယ်။အားလုံးဘဲအဆင်ပြေကြပါစေဗျာ။
Free Ringtone Maker 2.1.0.85
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 10:48 PM 1 comment:
Network Topology ဆိုတာ Computer တွေ တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံး Network ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပုံသဏ္ဍာန်ကို Network Topology လို့ ခေါ်ပါတယ်။ Network Topology လို့ ပြောတဲ့နေရာမှာ Network ချိတ်ဆက်မှု ပုံစံတွေ Network ချိတ်ဆက်ရာမှာ အသုံးပြုတဲ့ Network ကြိုးတွေ၊ Computer တွေ စတာတွေ အားလုံးသည် Network ရဲ့ Topology ထဲမှာ အားလုံး ပါဝင်ပါတယ်။
၎င်း Network ကြိုးတွေ Computer တွေပေါ် မူတည်ပြီး Network Toplogy
တွေ ကွဲပြားပြီး ထွက်လာပါတယ်။ အဲဒီလို ကွဲပြားပြီး ပေါ်ထွက်လာတဲ့ Network Topology ကို အမျိုးအစား (၄) မျိုး
ခွဲထားပါတယ်။ အဲဒီ Network Topology အမျိုးအစားတွေကတော့
(4) Mash Topology တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
(1) Bus Topology ရဲ့ ပုံသဏ္ဍန်
ကျွန်တော် အထက်မှာ ဆွဲပြထားတဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်ကတော့ Bus Topology ရဲ့ Network ချိတ်ဆက်မှု ပုံသဏ္ဍာန်ပဲ
ဖြစ်ပါတယ်။ Bus Topology ရဲ့ Network ချိတ်ဆက်မှုတွင် Backbone နှင့် Segment ဆိုပြီး (၂)မျိုး ဆွဲထားပါတယ်။
Segment အားလုံးသည် Backbone နဲ့ သွားရောက် ချိတ်ဆက်ထားရပါတယ်။ ၎င်း Backbone နဲ့ Segment ကို
ချိတ်ဆက်ရာတွင် Connector ဖြင့် ချိတ်ဆက်ရပါတယ်။ Bus Topology ဖြင့် Network ချိတ်ဆက်မှုတွင် ပထမဆုံး
Computer နှင့် နောက်ဆုံး Computer တို့ရဲ့ အစွန်းတစ်ဖက်စီမှာ Tarminator ဖြင့် ပိတ်ထားပေးရပါတယ်။ Bus
Topology မှာ အသုံးပြုတဲ့ Cable ကြိုးကတော့ Coaxial Cable ကြိုးကို အသုံးပြုပြီး ချိတ်ဆက်ရပါတယ်။
ကျွန်တော် အထက်မှာ ဆွဲပြထားတဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်ကတော့ Ring Topology ရဲ့ Network ချိတ်ဆက်မှု ပုံသဏ္ဍန်ပဲ
ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်က Ring Topology မှာ Logical အရ အလုပ်လုပ်ပုံနှင့် Physical အရ မြင်နေရပုံ ဆိုပြီး ပုံ(၂)ပုံကို
တွဲလျှက် ယှဉ်ပြထားပါတယ်။ ၎င်း ပုံ(2)သည် အတူတူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Ring Topology ဖြင့် Network ချိတ်ဆက်မှုတွင်
Physical အရ ကြည့်လိုက်ရင် Star Topology ဖြင့် ဆင်တူပါတယ်။ သို့သော် Physical အရ Star Topology ဖြင့်
တူသော်လည်း တကယ်တမ်း Logical အရ အလုပ်လုပ်တဲ့ ပုံစံကတော့ Ring ပုံစံဖြင့် အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် Ring Topology မှာ အသုံးပြုတဲ့ Central Davice က MAU (Multi Session Access Unit) ကို
အသုံးပြုပြီး ချိတ်ဆက်ထားရလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ MAU Device ရဲ့ Logical အရ အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံသည် Ring ပုံစံဖြင့်
အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ Ring Topology မှာ အသုံးပြုတဲ့ Cable ကတော့ STP (Shielded Twisted Pair) Cable ကို
ကျွန်တော် အခုအထက်မှာ ဆွဲပြထားတဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်ကတော့ Star Topology ရဲ့ Network ချိတ်ဆက်မှု ပုံသဏ္ဍာန်ပဲ
ဖြစ်ပါတယ်။ Star Topology တွင် အသုံးပြုရတဲ့ Central Device ကတော့ Switch ကို အသုံးပြုပြီး ချိတ်ဆက်ရပါတယ်။
၎င်း Switch သည် Switching ပိုင်းကို လုပ်ပေးရပါတယ်။ Star Topology မှာ အသုံးပြုတဲ့ Cable ကတော့ UTP
(Unshielded Twistad Pair) Cable ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော် အခုအထက်မှာ ဆွဲပြထားတဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်ကတော့ Mesh Topology ရဲ့ Network ချိတ်ဆက်မှုသည် Cable
များကို ရှုတ်ထွေးစွာ ချိတ်ဆက်ထားရပါတယ်။ ထို့ကြောင့် Mesh Topology ဖြင့် Network ချိတ်ဆက်မှုသည်
အမှားဒဏ်ကို ခံနိုင်မှု စွမ်းရည်ရှိပါတယ်။ သို့သော် Cable တွေရဲ့ ကုန်ကျမှုစရိတ်သည် အင်မတန်ကို များပြားပါတယ်။
Network ရဲ့ Physical Topologices ဖြစ်တဲ့ Bus Topology, Ring Topology, Star Topology နှင့် Mesh
Topology တို့သည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု တွဲလျှက်ချိတ်ဆက်ထားနိုင်သလို သိးသန့် Network Topology
တစ်ခုအနေနှင့်လည်းတည်ရှိနေနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်က အောက်မှာ ဥပမာအနေဖြင့် Network ရဲ့ Topology များ
အတူတကွ တည်ရှိနေပုံကို ဆွဲပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Network ရဲ့ Topology များ တစ်ခုနှင့် တစ်ခု တွဲလျှက်ရှိပြီး Network ချိတ်ဆက်ထားပုံ
ကဲကဲ---Network ရဲ့ Topology အကြောင်းကတော့ ဒီလောက်ပါပဲ...။
ဒီတော့ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ကျွန်တော် တစ်ခုလောက်ထပ်မှာပါရစေ Network Topology ဆိုတာ Computer များ
တစ်လုံးနှင့်တစ်လုံး အပြန်အလှန် Network ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံသဏ္ဍာန်ကို Network Topology လို့
Rev: Online Creator
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 10:26 PM No comments:
Labels: IT ဗဟုသုတ, Network
နောက်ထပ် Screen Saver လန်းလန်းလေးတစ်ခုထပ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။သူက
တော့ နေခြည်ဖြာဖြာအလင်းတန်းလေးရဲ့ အောက်မှာလိပ်ပြာလေးတွေပျံသန်းနေတဲ့မြင်ကွင်းကို Screen Saver အဖြစ်ဖန်တီးပေးထားခြင်းဘဲဖြစ်ပါတယ်။သဘာဝမြင်ကွင်းလေးတွေကို ကြိုက်နှစ်သက်
ဒါင်းရအဆင်ပြေအောင် Link နှစ်မျိုးမှာတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။